umshini wokubeka umshini wokubumba ummbila wesalida wokuthengisa ama-philippines india
Abalimi abaningi basebenzisa abantu ukusonga ummbila ngezandla ezingenazandla, okuwukuzivocavoca okwakha amandla. Kepha nansi umshini wokusabalalisa ummbila owenza lowo msebenzi ngemizuzwana nangesilinganiso esiphakeme.
Umshini wokugaya ummbila wenzelwa ukwahlukanisa ngomusa izinkamba zommbila ezikhukhweni nokususwa kwama-rachis. Bathola ukusetshenziswa ikakhulu emkhakheni wokulungisa imbewu, lapho ama-cobs ommbila avunwa khona njengoyunithi wonke. Esitshalweni esisebenzayo, umshini ubekwe ngemuva kokumiswa kwe-husking ne-cob. Isimbila sommbila sisusa izikhwebu ngendlela emnene ngokunokwenzeka ngokuhlikihla izimbotshana zisengozini yokulimaza umthamo wokuhluma kwembewu yommbila ebucayi.
Umshini omncane wokuphehla ummbila wokusetshenziswa kwabalimi nentengo yomshini wokushelela okushibhile.
Kuhlinzekwa ishaqi enkulu yomshini wokuzenzakalelayo wommboni omkhulu ukuze kusetshenziselwe ifektri yokusebenzisa ummbila .Intengo yomshini wokugaya ummbila we -utomatic uphakeme kunosayizi omncane kodwa ngomthamo omkhulu kakhulu.